Guddoomiye Sharif oo si rasmi ah u sheegey in uu yahay Musharax Madaxweyne – idalenews.com
Guddoomiye Sharif oo si rasmi ah u sheegey in uu yahay Musharax Madaxweyne
Shariif Xasan oo sheegay inuu wax badan ka qaban doono xaaladda Somalia haddii Madaxweyne loo doorto isaga (Shariif Xasan oo sheegay inuu taagan yahay Musharxnimada Xilka Madaxweynenimada) =Daawo Sawirada=
Gudoomiyaha Baarlamanka KMG Somalia Shariif Xasan Shiikh Aadan ayaa si buuxda u shaaciyey maanta inuu ka ka mid yahay Musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Somalia, ka dib munaasabad arintaas ku saabsan oo lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Shariif Xasan ayaa intaa ku daray in haddi xilkaas loo doorto uu wax badan ka qaban doono xaalada Somalia, uuna ku soo dabaali doono nabad, horumar iyo cadaalad ay helaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed dalkana uu gaarsiin doono doorashooyin xor ah, isagoo u mahad celiyey ciidamada DKMG ah iyo kuwa AMISOM sida ay sugayaan amaanka caasimada.
Madaxweynaha Somalia Shariif Shiikh Axmed iyo raisul wasaaraha ayaa dhowaan siyaabo kala gooni ah ugu dhawaaqay iney yihiin musharaxiin u taagan xilka madaxweynaha Somalia, waxaana Shariif Xasan gudoomiyaha Baarlamanka uu noqonayaa masuulkii 3aad ee xilkaas isku soo taaga, sadexda masuul ee ugu sareysa dowlada KMG Somalia.
Waxaa munaasabadaas ka hadlay, waxgarad haween, wasiiro soo maray xukuumadihii hore iyo siyaasiyiin ay ka mid ahaayeen Xasan Abshir Faarax, Jen. Yuusuf Maxamed Siyaad (Indhacadde) iyo qaar kale oo sheegay iney taageersan yihiin Shariif Xasan, waxaana hoolka heeso kala duwan ka qaaday, fanaaniin iyadoo sawirka Shariif Xasana meel walba laga soo muujiyey.
Gudoomiyaha Isbaheysiga nabada Soomaliyeed C/llaahi Shiikh Xasan oo ka mid ah siyaasiyiintii goobtaas ka hadashay ayaa sheegay inuu guul u rajeynayo Shariif Xasan ayna isbaheysigiisa la shaqeyn doonaan haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha Somalia, waxaana sidoo kale hoolka munaasabadaas uu ka socday goob jog ka ahaa raisul wasaarihii hore ee Somalia Cumar C/rashiid Cali Sharmarke.
Mahiga oo Fariin culus u direy Madaxda Sare ee Dowlada & Odey-Dhaqameedka ku howlan masuqmaasuqa
Beelaha Mudulood oo weli ku kala qeybsan 15kii xubnood ee beeshaasi lahayd